कहाँ खर्च हुन्छ रेमिट्यान्स ? अध्ययन भन्छः ४०% उपभोगमा, २८% घरजग्गा किन्न र २५% ऋण तिर्न – Clickmandu
कहाँ खर्च हुन्छ रेमिट्यान्स ? अध्ययन भन्छः ४०% उपभोगमा, २८% घरजग्गा किन्न र २५% ऋण तिर्न
क्लिकमान्डु २०७६ भदौ २५ गते १८:५० मा प्रकाशित
काठमाडौं । बैदेशिक रोजगारीमा गएका आफन्तले पठाएको रेमिट्यान्स तपाईं केमा खर्च गर्नुहुन्छ । दैनिक गर्जो टार्न, छोराछोरी पढाउन, ऋण तिर्न, घरजग्गा किन्न वा बचत गर्न ?
पहिलेको तुलनामा रेमिट्यान्सको रकम बचत हुन थालेको एक तथ्यांकले देखाएको छ । पहिला पहिला ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम उपभोग र ऋण तिर्नमा खर्च हुन्थ्यो ।
तर, राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययन अनुसार उपभोगमा जम्मा ४० प्रतिशत मात्रै रेमिट्यान्स खर्च भएको पाइएको छ । यस्तै, २८ प्रतिशत घरजग्गा किन्न र बचत गर्नमा खर्च भएको पाइएको छ भने २५ प्रतिशत ऋण तिर्नका लागि खर्च गर्ने गरेको पाइएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिबराज श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
विदेशबाट पैसा नेपाल पठाउँदा सेवा शुल्कवापत कुल रेमिट्यान्सको १.७ प्रतिशत शुल्क खर्च भएको अनुसन्धानमा देखिएको छ ।
डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठका अनुसार राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ३६.६ प्रतिशतले मात्रै बैंक खाता खोलेका छन् । त्यस्तै, ६.३ प्रतिशतले विदेश जानका लागि बैंकबाट मार्फत् लोन लिएर गएका छन् । बाँकीमध्ये अधिकांशले गाउँकै साहू महाजनसँग ऋण काढेर विदेश जाने गरेका छन् ।
अहिले रेमिट्यान्सको अधिकांश रकम उपभोग, घर जग्गा खरिद तथा निर्माण र ऋण तिर्नमा मात्रै केन्द्रित भएको भन्दै अब यसलाई विभिन्न तालिमहरु दिएर उद्यममा समेत आकर्षित गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए ।
‘रेमिट्यान्सको धेरै रकम घर जग्गा जस्ता कुरामा गयो, उपभोगमा भयो, अब उत्पादन बढाउने गरी चौतर्फी विकासका लागि खर्च गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
यसका लागि वित्तीय साक्षरता बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो ।
गत आर्थिक वर्ष कुल ८ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष नेपाली मुद्रा डलरको तुलनामा कमजोर हुँदा भने रेमिट्यान्स १७.५ प्रतिशतले बढेको छ भने जीडीपीमा रेमिट्यान्सको योगदान २५.४ प्रतिशत छ ।
राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स खर्च हुने क्षेत्रलाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगाउनका लागि जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समेत भएको छ ।
यसका लागि राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु र उनीहरुका परिवारलाई फाइनान्सियल साक्षरता सिकाउने, पूँजी बजारमा विशेष लगानीको औजार निर्माण गर्ने, भन्सार तथा अन्य करमा सुविधा दिने, सहुदियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यक्रम अगाडि सारेको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
त्यसैले विदेश जाने मानिस सबैको पहुँचमा बैंकिङ सेवा पुर्याउनका लागि राष्ट्र बैंकले तत्कालै कुनै न कुनै कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
२ वर्षको कार्यकालमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सफल भएँ: अर्थमन्त्री खतिवडाको अन्तर्वार्ता
४५ वर्षको कमाइ ४५ दिनमा गुमाएँ: सेयर बजारका बादशाह निर्मल प्रधानको उतारचढाव अनुभव
अर्थमन्त्री खतिवडामा देखिएको १८० डिग्रीको यू-टर्न: पद जोगाउन कि सुधार गर्न ?
कामनपाको सहयोगमा गंगालाल हृदय केन्द्रमा अक्सिजन प्लाण्ट, तीन करोड विनियोजन
भारतको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा नेपालको आर्थिक बृद्धिदर कम हुने, रेमिटेन्स घट्ने
बैंकले कडाइ गर्न थालेपछि सहकारीमा ऋणको माग ह्वात्तै बढ्यो, अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउने खतरा
राष्ट्रको लागि भन्दा आफ्नो परिवारका लागि संघर्ष गर्नेको संख्या बढ्योः मेयर शाक्य